भारतको आसाममा भयवाद – मझेरी डट कम
भारतको आसाममा भयवाद
अक्टोबर १५, २०१२
भारतको आसाम राज्यको पहाडी कार्विआङलाङ जिल्ला, राजडुबा गाउँमा प्रत्येक महिना ‘बसिबियालो’ साहित्यिक कार्यक्रम हुने गर्दछ ।
गत आइतबार अक्टोबर १४ मा बसिबियालो कार्यक्रमले ‘भयवाद’ दर्शनमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गर्यो । उक्त कार्यक्रममा ६० कि.मी. टाढाबाट सहभागीहरू साइकलमा आएका थिए ।
उक्त कार्यक्रमको समिक्षक मोहनसिंह राईलाई नेपाली टोपी ओढाएर शुरु गरिएको थियो । समिक्षक राईले आसन ग्रहन गरेपछि आसाम नेपाली साहित्य सभाका जिल्ला सचिव रन काफ्लेले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । संचालक काफ्लेले नै उपस्थिति भएका स्रोता र देश सुब्बालाई स्वागत गरेका थिए ।
भयवाद र देश सुब्बाको परिचय पछि उपस्थित स्रोता, पाठक, संगीतकार, विद्यार्थीहरूले सुब्बालाई भय के हो ? कसरी हुन्छ ? घरमा हुने भय, आसामका नेपालीलाई हुने जातीय भय, विद्यार्थीले कसरी भय प्रयोग गर्ने ? विवाहभन्दा अगाडि हुने भय ? संगीतमा भय कसरी प्रयोग गर्ने ? जस्ता व्यवहारिक जीवनमा आइपर्ने भयबारे प्रश्न गरेका थिए । ती प्रश्नहरूको सुब्बाले उत्तर दिएका थिए ।
३८ जना उपस्थित उक्त कार्यक्रममा ओम प्रकाश प्रसाई, निरु सापकोटा, शहरमान पौडेल, सन्जीव थापा, टेक बहादुर क्षेत्री, यादव क्षेत्री, ताराबीर क्षेत्री, जित क्षेत्री, उमा देवी, कृष्णा देवी, शेर बहादुर क्षेत्री, राजेन बहादुर राई, मोहनसिंह राई, अर्जुन पौडेल, पवित्र देवी, ओम किशोर क्षेत्री, हेम राज क्षेत्री, प्रकाश राई, प्रदिप राई, प्रकाश सुब्बा, रन काफ्ले, लव पौडेल र लंका कलेजका विद्यार्थीले प्रत्यक्ष प्रश्न सोधेका थिए ।
लव पौडेलको प्राविधिक सहयोग रहेको कार्यक्रमको अन्तिममा गायक, संगीतकार ओम प्रकाश प्रसाईले गीत सुनाएका थिए ।
स्क्यापबाट प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्ने तय भएता पनि नेट कनेक्शन हुन नसकेकोले फोनबाटै प्रश्न उत्तर भएको थियो ।
भारतको सिलगुढी, ब्रुनाइ पछिको यो भयवादको तेस्रो अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम हो ।
आसाम राज्यको राजधानी गुहाटीमा ‘भयवाद’ बारे २०१३ को जनवरीमा एउटा कार्यशाला गोष्ठी हुने भएको छ । गोष्ठीमा उत्तर भारतका ७ वटै राज्यबाट ५/५ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । प्रतिनिधिहरूलाई भयवादबारे प्रशिक्षण गरिने कार्यक्रममा नेपालबाट भयवाद अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष डा. टंक प्रसाद न्यौपाने, उपाध्यक्ष मुनाराज सेर्मा लिम्बू र सचिव दीपक सुवेदी सहभागी हुने छन् ।